भदौमा ३९ हजार पुग्नसक्छन् कोरोना संक्रमित:स्वास्थ्य मन्त्रालय – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भदौमा ३९ हजार पुग्नसक्छन् कोरोना संक्रमित:स्वास्थ्य मन्त्रालय
भदौमा ३९ हजार पुग्नसक्छन् कोरोना संक्रमित:स्वास्थ्य मन्त्रालय
६ असार, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले महामारीको रुप लिए आगामी भदौ पहिलो सातासम्म ३९ हजार संक्रमित हुनसक्ने आंकलन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ । साउन अन्तिम सातादेखि भदौको पहिलो साता कोरोना संक्रमिण उच्च विन्दुमा पुग्नसक्ने सरकारको विश्लेषण छ ।
त्यसबेला नेपालमा ३९ हजार संक्रमित हुनसक्ने विश्लेषण गरेर स्वास्थ्य सामाग्री र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।सचिव र विभागीय प्रमुखसहित शनिबार सञ्चारकर्मीहरु छलफल गरेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, विज्ञहरुको भनाइमा एकदमै खराब अवस्था आयो भने ३९ हजारसम्म पुग्नसक्छ भन्ने छ ।’
कोरोना संक्रमितको संख्यालाई १५ हजारभित्र समिति राख्न सकिन्छ भन्ने राणनीति अनुसार काम गरेको भए पनि त्यो बढ्ने देखिएको उनले सुनाए ।अहिले कोरोना पहिचान भएका अधिकांश कोरोना संक्रमित क्वारेन्टिनमा छन् । तर पछिल्लो समय क्वारेन्टिन स्थलहरु नै कोरोना सार्ने अखडा बन्न थालेको र त्यहाँ भएकाहरुलाई आरडीटी गरेर घर पठाउँदा संक्रमण समुदायमा पुग्नसक्ने खतरा कायमै छ ।
साथै ट्राभल हिस्टी नभएकाहरुमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ । साथै कतिपयमा मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छन् । त्यसैले कोरोना संक्रमणले कस्तो रुप लिन्छ अनुमान गर्न गाह्रो भएको जनस्वास्थ्यविज्ञहरु बताउँछन् ।
तर सरकारले भने भदौ पहिलो सातासम्म ३० हजारसम्म सङ्क्रमित हुने आंकलन गरेर पूर्व तयारी थालेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनीका अनुसार त्यति संक्रमित हुँदा चाहिनसक्ने सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) र भेन्टिलेटर लगभग तयार छ । उनकाअनुसार अहिले एक हजार भेन्टिलेटर र १८०० आईसीयू छन् ।
‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ टिम बन्दै-समुदाय स्तरमा संक्रमण देखियो भने परीक्षणसँगै कन्ट्याक ट्रेसिङ महत्वपूर्ण हुन्छ ।यसका लागि ३ हजार २२५ जनाको टोली बनाइने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भइसककेको छ ।यसका लागि चाहिने दुई तिहाइ स्वास्थ्य जनशक्ति अहिले छन् भने बाँकी भर्ना गरिनेछ ।
दैनिक १० हजार परीक्षणको लक्ष्य-मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शनिबार ७ हजार ४०० बढी नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । यसलाई बढाएर दैनिक १० हजार पुर्‍याउन थप पाँच ठाउँमा पीसीआर मेशिन जडान गरिनेसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाली सेनाको अस्पताल, नेपाल प्रहरीको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालका साथै दैलेख र डडेल्धुरामा प्रयोगशाला थपिनेछ । ‘अहिले रहेका प्रयोगशालाको स्तरवृद्धि र नयाँ थप पाँच प्रयोगशाला स्थापना गरेपछि हामीले दैनिक १० हजारको दरमा परीक्षण गर्न सक्छौं’ उनले भनेका छन् ।
तर अहिले पनि प्रयोगशालाहरुमा स्वाब थुपि्रएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा रुना झाले पनि सङ्कलित नमुनाको रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको बताइन् ।
कति छन् स्वास्थ्य सामाग्री ?संक्रमितको संख्या बढ्ने प्रक्षेपणसँगै मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्ऽरमण सिंहका अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), एन ९५ मास्क र सर्जिकल माक्स स्कटमा छ भने थप खरिदको प्रक्रिया चलिरहेको छ । एन ९५ मास्क २ लाख २८ हजार ४६९ थान र सर्जिकल मास्क ३३ लाख ९६ हजार बढी छ ।
यस्तै पीसीआर रि-एजेन्ट ७२ हजार ५००, पीसीआर रि-एजेन्ट पोर्टेबल १००८, आरडीटी ६४ हजार ६०९, आरएनए एक्ट्याक्सन पोर्टेबल १७ हजार ९८०, आरएनए एक्ट्याक्सन किट ३८ हजार ४४० र भीटीएम ३० हजार १४६ थान छ । ‘दैनिक ५ हजार टेष्ट गर्दा यो आरएनए एक्ट्याक्सन किट १९ दिनका लागि पुग्छ । पीसीआर रिएजेन्ट २१ दिनका लनगि पुग्छ र भीटीएम १५ दिनका लागि पुग्छ’ उनले भने ।
पाइप लाइनमा सामाग्रीहरुलाई पनि जोड्ने हो भने आरएनए एक्ट्याक्सन किट ५१, पीसीआर रिएजेन्ट ५५ र भीटीएम ५० दिनका लागि पुग्ने उनले बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव अर्यालकाअनुसार स्वास्थ्य सामाग्री खरिद लगायतका मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड खर्च गरेको छ भने केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै प्रदेशहरुलाई १६ करोड पठाएको भए पनि ७ करोड मात्र खर्च भएको छ ।
चाउचाउ खान मनपराउनुहुन्छ ? सावधान ! चाउचाउले निम्त्याउँछ यस्ता खतरनाक रोग
स्याङ्जामा एसपीसहित ३८ जना प्रहरी कोरोना संक्रमित, डिएसपी भन्छन्- समुदायबाटै फैलिएको हुनुपर्छ
धुलिखेल अस्पतालका १२० स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा, अस्पताल सिल
आफ्ना मतदातालाई मास्क लगाउन गगन थापाको अपील, घरघरमा मास्क पठाउँदै